नेपाल-चीन रेलमार्गः प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार, कहिले आउला चिनियाँ रेल? - Everest Dainik - News from Nepal
नेपाल-चीन रेलमार्गः प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार, कहिले आउला चिनियाँ रेल?
काठमाडौं, चैत २६ । चीनसँग जोडिने रेलमार्ग निर्माणको सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरी त्यसले ओगट्ने क्षेत्रफल तथा सम्भावित लागतसहितको प्रतिवेदन तयार पारिएको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनले भने, “केरूङबाट काठमाण्डू प्रतिकिलोमिटर करिब ४ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ, काठमाण्डूबाट पोखरा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर लाग्ने देखिएको छ। मुग्लिनबाट चितवन हुँदै लुम्बिनी जाने हो। मुग्लिनबाट चितवनसम्म करिब ३ अर्ब रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर र त्यहाँबाट अगाडि करिब एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। ”
ट्याग्स: china rail, KP oli